अत्यन्तै दुखद खबर ??? कोरिनाले लियो शिक्षक शाक्यको ज्या’न – Taja Khawar
अत्यन्तै दुखद खबर ??? कोरिनाले लियो शिक्षक शाक्यको ज्या’न
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २४, २०७८ समय: १:३७:४३
कोरोना सङ्क्रमितको उपचार हुँदै आएको बाँकेका अस्पतालमा गए राति थप चार बिरामीको मृत्यु भएको छ ।
बाँकेमा एक हप्तायता कोरोना सङ्क्रमण र मृत्युदर घट्दै गएको छ । अहिले अधिकांश बिरामी बाहिरी जिल्लाबाट प्रेषण भई आउने गरेका छन् ।(ताजा खबर)
Last Updated on: June 7th, 2021 at 1:37 am